अब सुत्केरीले एक बर्षसम्म बिदा पाउने - Everest Dainik - News from Nepal
अब सुत्केरीले एक बर्षसम्म बिदा पाउने
काठमाडौं, भदौ २९ । सुत्केरी महिलाले अब एक बर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउने भएका छन् ।
संसदको स्वास्थ्य शिक्षा समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलपछि प्रसूति बिदा अपूग भए चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक बर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउने व्यवस्था गरेको हो । कान्तिपुरमा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस सोनम ल्होसार मनाउन ३ दिन सार्वजनिक विदा
ट्याग्स: Bida, Sutkeri mahilaa
ड्युटीमा खटिएका सईको टिप्परको ठक्करबाट मृत्यु
को हुन् मंगलबार बिहान थपिएका १२ कोरोना संक्रमित ?
२ जनामा कोरोना देखिएपछि टोखा क्षेत्र सिल
नेपालमा किन बढ्दैछ कोरोना ?
टिप्परको ठक्करबाट ड्युटीमा खटिएका प्रहरी घाइते